Anjaran’ny rehetra no mieritreritra ny valiny. Ny mandravona azy dia fotoana tokony hanovana ny tantaram-pirenena ho amin’ny tsaratsara kokoa izao. Samy manana ny fanentanany ireo mpandray anjara te hahazo an’Iavoloha saingy an’ny vahoaka ny fanapahan-kevitra. Eto izany no tonga amin’ilay filazan’ny mpandinika izay hoe mila vahoaka mahatsapa na “sensible” fa tsy vahoaka nosasana atidoha nentanina sy noterena hahatsapa na “sensibilisé”. Fandaharan’iza amin’ireo kandida ireo no miteha-tany sy mifandraika amin’ny zava-misy iainan’ny mponina eto Madagasikara ary azo antoka fa ho tratra anatin’ny 5 taona ? Ny an’ilay nilaza fa tonga ny fotoana hanaovana an’i Madagasikara ho toa an’i Etazonia na Dobay na izao firenena faran’izay matanjaka rehetra izao ve sa ny an’izay niteny kosa hoe tonga ny fotoana hahafahana manangana an’i Madagasikara ? Inona no tokony ho laharam-pahamehana ao anatin’izao fiainam-bahoaka miha mivarina an-kady izao ? Ny fijerena izay hahafahantsika misitraka fitsaboana sahaza sy mirary ve sa ny fanitarana toeram-piantsoanam-piara any amin’ireo sekolim-bahoaka ? Ataon’ireo mpianatra sy ny ray aman-dreniny inona daholo moa izany raha toa ka amin’izao fotoana izao aza efa tsy in-telo isan’andro intsony izy no homan-kanina fa efa latsak’izany ? Am-bava homana ary atsipy ny teny any am-pon’ny mahalala.